Duulimaadyada Geneva ilaa New York ee SWISS iyo United Airlines hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada Geneva ilaa New York ee SWISS iyo United Airlines hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Switzerland War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Duulimaadyada Geneva ilaa New York ee SWISS iyo United Airlines hadda.
Waxaa jira dalab diyaarsan oo ku aaddan safarka Switzerland ee Mareykanka, tanina waa war lagu farxo oo loogu talagalay safarrada firaaqada iyo kuwa ganacsiga.
SWISS waxay ka shaqayn doontaa ilaa afar duulimaad toddobaadkiiba JFK -da New York laga bilaabo Diseembar 14, 2021.
United Airlines waxay dib u bilaabi doontaa duulimaadyada Newark-Geneva 1-da Noofembar, 2021-ka, iyada oo toddobaadkiiba ay afar duulimaad samayn lahayd.
United Airlines iyo SWISS waa wada -hawlgalayaasha codeshare iyo xubnaha Isbahaysiga Star.
Khadadka Hawada Caalamiga ah ee SWISS, Xamuulka calanka qaranka Switzerland, ayaa ku dhawaaqay inay dib u bilaabi doonto duulimaadyadii u dhexeeyay Madaarka Geneva (GVA) iyo New York's John F. Kennedy International Airport (JFK) maalmaha la xushay ee toddobaadka oo ka bilaaban doona December 2021. SWISS waxay ka shaqayn doontaa ilaa afar duulimaad a usbuuc ilaa JFK laga bilaabo Diseembar 14, 2021.
United Airlines ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in adeeggeeda u dhexeeya Madaarka Geneva iyo Madaarka Caalamiga ah ee Newark Liberty (EWR) uu dib u bilaaban doono 1 -da November, 2021 -ka, iyada oo toddobaadkiiba la samayn doono afar duulimaad.
Labada diyaaradood waa wada -hawlgalayaasha codeshare iyo xubno ka tirsan Star Alliance.
Waxaa jira baahi loo qabo safar lagu tago Switzerland tanina waa war soo dhaweyn leh oo loogu talagalay safarrada firaaqada iyo kuwa ganacsiga. Taasi waa run gaar ahaan kuwa raadinaya duullimaadyada tooska ah ee Geneva iyo Vaud, gobolka ku hadla Faransiiska ee xeebta harada Geneva. Go'aanka SWISS iyo United wuxuu muhiim u yahay ganacsiga iyo dalxiiska caasimadda Lausanne, hoyga Madxafka Olombikada, iyo sidoo kale magaalooyinka harooyinka sida Montreux iyo Vevey. Waqtiga ogeysiiska ayaa sidoo kale ku habboon bilowga xilliga barafka 2021-22 ee meelaha lagu nasto jiilaalka, oo ay ku jiraan Villars, Les Diablerets iyo Leysin, iyo sidoo kale Glacier 3000.
Waddada u dhaxaysa Geneva iyo New York waa mid ka mid ah isku xidhka ugu taariikheed ee madaarka. Waxaa la bilaabay dagaalkii 1947 ka dib si loogu xiro labada xarumood ee Qaramada Midoobey waxayna noqotay buundo diblomaasiyadeed. Maanta, Geneva waxay hoy u tahay in ka badan 30 ururro dowladeed iyo ku dhawaad ​​400 oo NGO. Kahor masiibada COVID-19, gobolku wuxuu martigaliyay in kabadan 3,000 shirar caalami ah iyo shirar sanadkiiba. Dad badan oo u dhashay waddamo badan oo Ameerikaan ah ayaa xarumo goboleed ku leh Switzerland oo ku hadasha afka Faransiiska gegida dayuuradduna waa isku-xidh muhiim u ah Canton of Vaud iyo Mareykanka labadaba safarka ganacsiga iyo xilliga firaaqada.